samedi, 06 mai 2017 22:02
Ivato : Une forte détonation a effrayé la population du secteur K2
Un gendarme du GSIS a fait exploser une grenade ce matin, pour exprimer le succès de la circoncision de son fils.
La forte explosion a effrayé la population du secteur K2 de la commune d’Ivato région Analamanga.
Quid du règlement de la détention et d'usage de ce genre d'explosif?
samedi, 06 mai 2017 19:48
Grand Pavois - Mahajanga : Mangina tanteraka
Taorian'ny loza nitranga taty amin'ny morontsiraky ny Grand Pavois, manjary mangina tanteraka aty an-toerana. Tsy misy mpitsangatsangana tonga mihitsy fa ireo mponina manodidina sy ireo mpivarotra ihany no mifamezivezy eny an-toerana. Mivelatra fotsiny ary babangoana ireo trano heva sy elo natao fipetrapetrahana sy fialokalofan'ny mpitsangatsangana.
Nampihena sy nampatahotra ireo mpitsangatsangana ny loza niseho herinandro lasa izay ka mahatonga izao fahanginana tanteraka izao raha ny nambaran'ireo mpivarotra.
Hatramin' izao tokoa mantsy tsy mbola hita ilay tovolahy natelin'ny ranomasina, izay raha tsiahivina dia mpianatra nanao dia fibeazana taty Mahajanga ireto mpianatra avy any antsirabe no tra-doza.
Mitaraina ireo mpivarotra sy mpampiasa vola madinika ety amin' ny Grands Pavois satria tsy misy mpanjifa ny entana amidin'izy ireo ary tafiditra fatiantoka mihitsy aza.
samedi, 06 mai 2017 15:01
Mahajanga : Hanara-maso ireo “bar” tsy ara-dalàna ny Kaominina
Ho hentitra ny Kaominina ambonivohitra Mahajanga amin’ireo toeram-pisotroana tsy manara-dalàna eto an-toerana satria dia mitombo isa isan’andro izany nefa tsy manana taratasy fazahoan-dàlana hisokatra sy hampisotro ny mpanfija ny ankamaroan’izy ireo.
Hojerena koa ireo “bar” izay mandefa ny zava-maneno mafy ka miteraka fanelingelenana ny manodidina, sy tara fihidiana amin’ny alina.
Efa maro ireo “bar”no efa nazahoana fitaraina fa manakotaba ny manodidina azy.
samedi, 06 mai 2017 15:00
Fianarantsoa : Entanina amin'ny resaka fananan-tany ireo mpianatra amin'ny oniversite
Nanokana tapak'andro maraina ity sabotsy 6 mey ity ny tetikasa LAMINA mba hanofanana ny mpianatra eny amin'ny oniversite eo amin'ny lalàna mifehy ny fitompoana ny tany.
Isan'izany ny resaka fandovana, ny fanamaintisa-molaly, ny didy miafina.
Natao izany mba ho fampihenana ireo ady tany hita eny amin'ny fiaraha-monina ka ireo tanora ireo no andrasana ho mpanazava ny sain'ny mpiara-belona raha sendra tranga mampifanolana.
Izy ireo ihany koa no entanina mba handray andraikitra hanao fitarihana ny olona ho eny amin'ny ivontoerana misahana ny fananan-tany raha misy ny olana miteraka disadisa.
Mitohy amin'ny toerana maro eto an-tananan’i Fianarantsoa izao hetsika fanofanana sy fampahafantarana izao.
samedi, 06 mai 2017 12:50
Korea avaratra: Midonaka ny fifandraisana amin'ny Amerikanina
Efa ho herinandro vitsivitsy izao no mifanenjana ny roa tonta, ankehitriny, dia ampangain'ny Koreanina Avaratra ny mikasa ny hamono ny Filohany Kim Jong-Un ny sampam-pitsikolovana amerikanina na ny CIA.
Ny Amerikanina moa dia manohy mametraka fitaovam-piadiana mahery vaika any Korea Atsimo ho fiandry raha mahery fihetsika ampiasa misila, na baomba atomika ny Korea Avaratra.
Ny filoha amerikanina Donald Trump moa dia nanambara fa ho vitainy ny momba an'i Korea Avaratra raha miantsy ady aminy.
Antsirabe : Notolorana solosaina hiofanany ireo jamba
Solosaina miisa 10 no natolotra sy hampiofanana ireo jamba eto Antsirabe, ka olona 10 isan'andro no hianatra ao, izay hiofana mandritra ny 6 herinandro raha ny nambaran'Atoa Ratobimiarana Haingo, mpandrindra ny tetikasa Voatra Asa eto Antsirabe.
Tanjona ho azy ireo ny hanofana jamba hatrany amin'ny 70 isa ka ho afaka hiasa amina sehatra maro mihitsy izy ireo aorian'ny fahavitan'ny fiofanana ataony mba tsy ho vesatra eo amin'ny fiaraha-monina.